Baro Sidda Loo sameeyo Shaah Soomaali! |
Haku Digan nimeey dani haayso |Tukesomalism.com
Tuke Somalism, June 1, 2016
Jacaylkii Qarniga – Waligaa ma aragtay jacaylkaan oo kale?
Tuke Somalism, October 15, 2015
Caddaalada Iyo Horumarka
Ismaaciil Ibraahim Hassan, April 22, 2019
Tuke Somalism — September 14, 2015
Kusoo dhawaada barnaamijkeenii xiisaha badnaa ee cunta karinta ee aad kalla socotaan Machadka AJ. Maanta waxaanu karini doonaa Shaah. Jalmad mise ibriiq ama kirli hadba sidda aad u taqaanaan.
Markii aad shaah karinayso waxaad u baahantahay:
Kirli ama jalmad mise ibriiq sidda aad u wada taqanaan.
Qorfo hayl iyo dhaga yaro
Iyo halkii aad ku karsani laheed (dam)
Marka horre jalmada ayaad dhaqeysaa oo aad nadiif kadhigeysaa. Sidda aan wada ogsoonahay nadaafadda waa shey qaali ah, marwalbana ku dadaal siddii aad u nadiifsani laheed allaabta aad wax ku cunayso.
Markaad jalmada dhaqdo waxaad ku shubeysaa 6 galaas oo biyo ah kabacdi waxaad saareysaa STOVE-ka ama haddii aad isticmaasho qoryo mise dhuxul. Waxaadna sugeysaa illaa iyo 15 daqiiqado marka ey falfalaan biyaha waxaad ku shubeysaa galaas sonkor ah mise waad ka yareyni kartaa sonkorta hadba waa dooqaada sidda aad adiga jeceshahay.
Sababtoo ah 6-dii galas oo biyo ah waxa ey u bahaanyihiin 1 galaas oo sonkor ah marka aad ku shubta sonkorta kabacdi waxa aad sugeysaa illaa 2 daqiiqo.
Waxaad soo qabsaneysaa 12 xabbo oo heyl ah iyo 3 xabbo oo qarfo ah intaas marka aad kudartid waxaad hadana sugeysaa 1 daqiiqo kabacdi caleynta ayaad ugu dhigeysaa normal.
Waxyar kadib illaa mudo 2 daqiiqo waad kasoo dejineysaa oo waxaad ku shubanaysaa falaaska shaaha mise tarmuushka sidda aad adiga u taqaano oo diyar kuu ah. Waad cabi karta hadda haddii aad nuucaas u karsato.
Intaas markaad sameyso haddii aad doonto cadeys ayaad ka dhigani kartaa oo caano ayaad ku darsani kartaa mise haddii aad bigeeska ka jeceshahayna waxad cabi kartaa bigeeska.
Next post Boqolkiiba 30 shacabka Maraykanka oo aaminsan in Obama uu yahay Muslim
Previous post Soomaaliyey SHAME ON YOU |Tukesomalism.com
Maxaad Ka Taqanaa Bariis Isku Karis Soomaaliyeed?
Tuke Somalism, September 10, 2015
Tuke Somalism, August 23, 2015